Wednesday July 08, 2020 - 17:08:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbaahinta caalamiga ah ayaa si aad ah isha ugu hayo arrimaha ka aloosan dalka Itoobiya.
David Shinn oo lafadhiya Males Zenawi
Dowladaha saliibiyiinta reergalbeedka oo 30-kii sanadood ee lasoo dhaafay Itoobiya ka dhiganayay awood ay u adeegsadaan in ay madaxa uga istaagto muslimiinta geeska afrika ayaa qudhoodu walaac ka muujinaya xaaladda wadankaas ka aloosan.
David Shinn oo ah diblumaasi ruug cadaa arrimaha afrika ah islamarkaana horay usoo noqday safiirka mareykanka ee Addis Ababa ayaa walaac ballaaran ka muujiyay waxa Itoobiya ka socda isagoona Abiy Axmed ugu baaqay in uu qaado isbedello waaweyn.
Shinn oo lahadlayay telefeshinka Al Jazeera qeybtiisa Englishka ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in ay burburto dowladda Itoobiya taas bedelkeedna wuxuu kula taliyay siyaasiyiinta Xabashida isku tanaasul iyo in ay wadahadal ku xallistaan khilaafaadka dhaxdooda ah.
Dowladda Mareykanka ayaa ciidamada Xabashida Itoobiya u adeegsata gummaadka iyo gummeysiga ay ka wadaan dalka Soomaaliya, sanaddii 2006 markii ay melleteriga Itoobiya ku duulayeen Soomaaliya ayuu Davi Shinn ahaa safiirka Mareykanka ee Addis Ababa isagoona G.W Bush mas'uul uga ahaa qarash garaynta duullaankaasi
R/wasaaraha Itoobiya oo markii uu xilka qabtay caalamka iyo iyo xabashidaba umuujiyay in uu layimid siyaasad furfurnaan ah ayaa hadda qaaday dhabbihii males iyo haylamaryam wuxuuna adeegsanayaa siyaasadda qamcinta shacabka iyo siyaasiyiinta.
Sawirro: Dab khasaare geystay oo ka kacay mid kamida suuqyada magaalada Addis Ababa.
Diyaarad ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalad Jubba.
Dad badan oo ku dhintay diyaarad ku burburtay wadanka Hindiya.
Sarkaal Itoobiyaan ah oo lagu dilay Addis Ababa iyo Jowhar Muxamed oo laxiray.
Dibad baxyo rabshada wata oo hareeyay magaalada Addis Ababa.